फेरी बढ्यो डलरदेखि रियालसम्मको भाउ, आज कति छ ? [सूचीसहित] - Ratopress::रातो प्रेस
फेरी बढ्यो डलरदेखि रियालसम्मको भाउ, आज कति छ ? [सूचीसहित]
फागुन २७, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको विनिमयदरका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ । सोमबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११७ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ २८ पैसा थियो ।
युरो एकको खरिददर १३५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३५ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ भने सोमबार १३२ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ४९ पैसा थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पाउण्ड एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ ।
मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ ४ पैसा र बिक्रीदर २८ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ । यता, कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ भने, युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ ।
तालिकामा हेर्नुहोस् २० देशको विनिमयदर :-
NCELLले रिचार्जमा अब १२० प्रतिशत बोनस ब्यालेन्स दिने
पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको भाउ घट्याे
सुनको मूल्य ५५ सयले घट्यो
घरेलुद्वारा वडा नं. ११ का २६ जना महिलाहरुलाई १५ दिने सीप विकास तालिम प्रदान
दाङ काठमाडौँ रुटमा भित्रिए सुविधा सम्पन्न रात्रि बस
आन्तरिक उडानमा चार अर्ब घाटा